NISA oo sheegtay in ay hakisay qandaraasyo uu saxiixay Wasiirkii hore ee Amniga… – Hagaag.com
NISA oo sheegtay in ay hakisay qandaraasyo uu saxiixay Wasiirkii hore ee Amniga…
Hay’adda Sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa sheegtay in ay joojisay ama hakisay Qandaraasyo Malaayiin Dollar ah ku baxay sanadihii la soo dhaafay, islamarkaana uu horay u saxiixay Wasiirkii hore ee Amniga Gudaha Soomaaliya Cabdirisaaq Cumar Maxamed.
Qoraal ka soo baxay taliska ayaa lagu shegay in qandaraasyadan la hakiyay ee ku saxiixan Wasiirkii hore ee Amniga loo gudbiyay Hanti-dhowrka guud ee Qaranka.
‘’Hay’adda Sirdoonka Qaranka waxey hakisay una gudbisay Hanti-dhowrka guud ee Qaranka, qandaraasyo malaayiin doolar dhan, oo baxay sanadihii lasoo dhaafay, uuna saxiixay Wasiirkii hore ee amniga, si uu u baaro uguna gudbiyo hey’adaha ay khuseyso”ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee NISA.
Hase ahaatee warka ka soo baxay taliska Nabad-Sugida waxaa ka hor yimid oo ku tilmaamay dacaayad raqiis ah Wasiirkii hore ee Amniga Gudaha Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo intaa ku daray NISA ay hadda isku badashay sida uu hadalka u dhigay NSStii kaligitaliska.
Faah faahin dheeraad ah lagama bixin waxa ay ahaayeen qandraasiyadan iyo heshiisyadan la hakiyay oo ay horey u saxiixday Wasaarradda Amniga Gudaha.